Tatitr’i Etazonia – Tandindonin-doza ny gidro eto Madagasikara - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Tatitr’i Etazonia – Tandindonin-doza ny gidro eto Madagasikara
Voka-pikarohana isan’ny nampihorohoro ny firenena amerikanina ny filazana fa ahiana ho lany tamingana ny gidro eto Madagasikara. « Mampanahy mafy an’i Etazonia ny voka-pikarohana farany navoakan’ny manam-pahaizana manokana iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana, izay nilaza fa maherin’ny 90%-n’ireo gidro eto Madagasikara no tandindonin-doza na ahiana ho lany tamingana ato ho ato », araka ny tatitra navoakan’ny seraseran’ ny masoivoho amerikanina eto amintsika.
Voatondro molotra indray ny mpitondra tetezamita ankehitriny. « Manainga ny fitondram-panjakana malagasy mba hampitsahatra ny fivarotana karazan-java-manan’aina sy hazo voaaro, ary hampiato avy hatrany ny famotehana mahatsiravina ireo harena natao holovain’izao tontolo izao », hoy ny karazana antso fanairana nataon-dry zareo Amerikanina.
Mifamahofaho ny fiainana. Samy manana ny anjarany tokoa ny olona. Maro amin’ny olona manan-katao no efa niandrandra sy niomana tamin’ny fetin’ ny Pantekosta. Isan’ireny ny fiatrehana ny sakafo miavaka amin’ny andavanandro, ny fanomanana ny hoenti-manana amin’ny fitsangan- tsanganana. Tsy mba toa izany kosa anefa ny fiainan’ ireo olona sahirana. Vary notsimponina manerana ny tsena no mba niandrandran’ izy ireo niatrehana izany fety izany, araka ny hita tetsy Anosibe. Vao maraina tamin’ny sabotsy teo dia efa tazana manerana ny
Mbola tsy nivoaka ny didim-panjakana manamafy ny fampiharana ilay fampiakarana ny karaman’ireo mpiasan’ny sehatra tsy miankina. Araka ny fanazavan’ny teo anivon’ny minisiteran’ny Asam-panjakana sy ny lalàna sosialy dia nisy antontan-taratasy nangatahan’ny teo anivon’ny Filankevitry ny governementa, tamin’iny herinandro lasa iny, ka izay no tsy mbola nivoahan’ny didim-panjakana manamafy ny fampiharana iny taha fampiakarana 8% iny.
Tsy ara-dalàna. Nampitandrina ny mpanjifa ny minisitry ny Fahasalamana, Dr Ndahimananjara Johanita, manoloana ny dokam-barotra sasany momba ireo fitaovana ambara ho manasitrana aretina, miverimberina amin’ny haino aman-jery. «Voararan’ ny lalàna iray nivoaka tamin’ny taona 2001 ny fanaovana dokam-barotra momba ny fitaovana samihafa, ambara fa azo hitsaboana ny olombelona, toy izay hita tao ho ao, lazaina ho mitsabo tosi-dra na homamiadana, na mampihena ny habetsahan’ny menaka anaty ny tenan’ny olona na koa mitsabo diabeta sy
Afaka manovo fahalalana amin’ny alalan’ny teknolojia vaovao indray ireo mpianatra ao Soavinandriana. Nahazo solosaina efatra, miaraka amin’ny “connexion internet” haingam-pandeha izy ireo. Fiaraha-miasa teo amin’ny fikambanana Fitia sy ny orinasa Orange no nahafahana nanao izany. Ity farany ihany koa izay nametraka “coach multimedia” any an-toerana mba hanoro sy hampianatra ny ankizy amin’ny fampiasana ny “internet”.
Alatsinain’ny Pentekosta – Malaina maka fahazoan-dalana manokana ireo fiara mpitatitra(0)
Tsy nahasakana ny olona tamin’ny fandehanana nitsangantsangana ny fahasahiranana sy ny toetr’andro. Vao maraina mantsy dia efa zara raha nisy ny taksibe niasa tamin’ny zotra nisy azy. Lasa nanao fitaterana manokana avokoa ny ankamaroan’izy ireo. Vao maraina ihany koa omaly dia efa tazana sy tomefy olona mandeha an-tongotra ny arabe rehetra ho an’ireo tsy naka fiara manokana. Fotoana nampandeha ny tsenan’ ireo fiara fitaterana ny omaly. Ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fitaterana anefa nilaza fa vitsy dia
Gidro, Mpanoratra Rijakely, 20.07.2012, 09:12	FIARAHAMONINA